मैले भर्खरै युएस सिटिजनसिप प्राप्त गरेकी छु । मेरो श्रीमान्को ग्रीनकार्ड नै छ । हाम्रा दुई बच्चाहरु १२ र १४ वर्षका ग्रीनकार्ड होल्डर नै छन् । मैले सुनेअनुसार बाबु वा आमाको नेचुरलाइजेसन भएपछि अटोमेटिकली छोराछोरीहरुले युएस सिटिजनसिप पाउँछ रे । के यो सत्य हो ? यदि हो भने यसको प्रक्रिया के होला र मेरो छोराछोरीहरु योग्य छन् कि छैनन् होला ?
– रस्मी, अमेरिका
सर्वप्रथम तपाईंले युएस सिटिजनसिप पाउनुभएकोमा बधाई छ । तपाईंको ग्रीनकार्ड होल्डर नाबालक छोरा वा छोरीहरु तपाईंको नेचुरलाइजेसन भएको आधारमा नेचुरलाइजेसनको लामो प्रोसेसमात्र नगइकन नै युएस सिटिजनसिप पाउन योग्य छन् ।
चाइल्ड सिटिजनसिप एक्ट २००० ले व्यवस्था गरेअनुरुप बाबुआमाको नेचुरलाइजेसनबाट उनीहरुको बच्चाहरुले यी निम्न तलका कुराहरुका आधारहरु स्याटिसफाइ गर्न सके स्वतः युएस सिटिजनसिप प्राप्त गर्न सक्नेछन् । जस्तै– १) एक बाबु वा आमा सिटिजन हुनुपर्ने, २) सो सिटिजनसिप प्राप्त गरेको दिनमा छोरा वा छोरी १८ वर्षभन्दा मुनिको उमेरमा छ, ३) सो बच्चा पर्मानेन्ट रेसिडेन्टको स्टाटसमा अमेरिकामा बसोवास गरिरहेको छ, ४) सो बच्चाहरु युएस सिटिजन बाबु वा आमाको लिगल र फिजिकल कस्टडीमा छ ।
यसरी युएस सिटिजन बाबु वा आमाबाट सिटिजनसिप प्राप्त गर्नका लागि उक्त युएस सिटिजन प्यारेन्ट्सले वा चाइल्ड एप्लिकेन्टले एन–६०० एप्लिेकसन (एप्लिेकसन फर सर्टिफिकेट अफ सिटिजनसिप) भरेर युएससीआईएसमा पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तो निवेदन पेश गर्दा माथि उल्लिखित कुराहरु पुष्टि हुने कागजपत्र आदिसमेत संलग्न गरी युएससीआईएस फी राखी युएससीआईएसमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । युएससीआईएसलाई निवेदनमा पेश गरेको कुराहरुमा चित्त बुझेको खण्डमा सो निवेदन स्वीकृत गरी दिनेछ । यदि निवेदनमा कुनै कमी कसर देखिएमा अन्तरवार्तासमेतको माग गर्न सक्नेछ ।
तपाईंको बच्चाहरु १२ र १४ वर्ष मात्र भएको र उनीहरु तपाईंले युएस सिटिजनसिप प्राप्त गर्दा १८ वर्षभन्दा मुनि भएकाले डेरिभेटिभ नेचुरलाइजेसन वा युएस सिटिजनसिपका लागि योग्य छन् । त्यसैले सबै रीत पुगी तपाईंको छोरा वा छोरीको एन–६०० निवेदनहरु स्वीकृत भएमा उनीहरुले पनि युएस सिटिजनसिप प्राप्त गर्नेछन् ।